Botulism Infant | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Saameynta sunta ee malab iyo sharoobada maple ee ilmaha
Maya malab iyo sharraxaad la'aan maahan ilaa ugu yaraan 1. dhalashadiisa
Cunnad aan caadi ahayn laakiin aad u daran ee ilmaha yar waa botulism infant. Botulism ka qayib Laatiin ah botulus (bolse), wax-u-sumowga macdanta hilibka iyo waa nolol halis, by sun ah botulinum (Clostridium botulinum bakteeriyada) sababa sumowga.
Botulism Infant by malab ama sharoobada maple
Sida daroogada suntu waa dheecaanka malab ama sharoobada jilicsan ee macaan. Sida shaaha ama boorashka ilmaha loo yaqaan. Honey dhadhan dhadhan macaan oo waa cuntad dheef badan, taas oo loo isticmaalo ujeedooyin caafimaad. Casiir dahab ah ayaa la siiyaa dhinacyo badan oo caafimaadka ah, waliba cuntadani maaha mid calaamadaysan. Si loo dilo bakteeriyada cuntada waa in la kululeeyo heerka 120 ° mudo dheer. Tani macquul ma aha malab. Waa badeecad dabiici ah, sidaas darteedna waxaa lagu soo bandhigaa dukaamada.
Botulism Infant - Khatarta dhalaanka u dhaxaysa malab
Liidata conserved ama hermetically cuntada laga shaabadeeyey, sidaas malab ama Maple sharoobada, kaas oo lagu wasakheeyay sun ah, spore foomka bakteeriyada iyo gaari isticmaalka ee flora xiidmaha.
In dhallaanka ilaa hal sano, ugu nugul bilood 6, iyadoo difaaca jirka ka sii darta iyo flora xiidmaha daciif ah, waa sun gaadiid dhex septum xiidmaha dhiiga oo markaas ka on helo inay dhammaato dareemaha in habdhiska ka durugsan meesha la sii daayo neuronal muhiim ah Walaxda rasmiga ah ayaa laga hortagayaa.
Sunta saameyntu waxay saameeysaa calaamadaha udhaxeeya neerfaha iyo murqaha. curyaannimo A gurguurta oo dhan gobollada jidhka iyo xubnaha iyo joojin xiidmaha waa cidhibta halis ah. Saamaynta sunta lama ogaan karo isla markiiba, hadana inta badan calaamadaha waxaa la ogaan karaa oo keliya maalmo kadib, xitaa toddobaadyo. Daciifaan murqaha isha, la'aanta wajiga, curyaannimo oo ka mid ah murqaha-mareenka ilaa neefta oo neefta iyo joojin neefta, liqidda, iyo tabar-dari muruq nidaamka muruqyada yihiin calaamadaha sumowga by botulinum oo keeni kara in ay si degdeg ah dhimasho haddii aan, xaalad degdeg ah iyo daryeel degdeg ah. Marka la eego soo kabashada caafimaad ee buuxda waa suurtagal, laakiin waa inaad filaneysaa dhaawac soo gaadhay.
Sannad kasta kiisaska botulism-ka ee carruurta waxaa lagu wargeliyaa Machadka Robert Koch ee Berlin. Daraasadaha noocan ah ee suntan iyo saameynteeda ayaa laga sameeyey Europe tan iyo 1976, kaddib markii kiiskii kowaad uu dhacay oo laga helay Maraykanka. Kiisaska badan ayaa si tartiib tartiib ah u muuqday Australia, Maraykanka iyo degaanka Japan. Waxa kale oo jira xiriir la leh cilladda dhimashada carruurta ee degdegga ah. Yurub, waxaa waajib ku ah in uu soo sheego Sharciga Ilaalinta Infakshanka.
caafimaadka ee ilmaha aawadood, ilaa dhalashada kowaad waa in la siiyey dose of malab iyo Maple sharoobada si botulism dhallaanka ee soo koraya ka mid ah jidka si looga fogaado khatarta.
In dhallaanka, carruurta, dhallinyarada iyo dadka waaweyn, iyadoo si buuxda u shaqeeya flora xiidmaha iyo septum colon caafimaad, sun la raaca, iyada oo aan taas u galo dhiigga ee jirka, sida waxaa ay dhacdaa marka la heli karo in malab qaadasho yar yahay. Diiwaangelinta suntan hooyooyinka kalkaaliyaha ah ee qaata malabkana lama siinayo.
Marka laga reebo tan, si kastaba ha ahaatee, waa boogta iyo daaweynta daaweynta ibta oo leh malab. Guud ahaan, waa in la ogaadaa in mid ka mid ah ay tahay in uu iska ilaaliyo cunnida cunnooyinka ilmaha, curiyaha guriga lagu sameeyo iyo shaaha / cabitaannada guud ahaan, sababtoo ah taasi waxay keeni kartaa oo keeni kartaa khataro dheeraad ah ama cudurro.
Dhab ahaan, kiiskii kowaad ee botulism-ka ee carruurta waxaa laga helay 1976 ee California. Jarmalka, waxaa jiray celcelis ahaan hal kiis oo noocaas ah sanad kasta tan iyo 1996. Xanuun ka mid ah sunta sunta sunta ee sunta ah ayaa horumarisa. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadan kartaa dhowr maalmood asbuucyada si ay calaamadaha u muuqdaan. Sidaa daraadeed, way adag tahay in dhakhtaradu ogaadaan xiriirka ka dhexeeya cuntada iyo cudurka. Haddii suntu gasho dhiigga marinka mindhicirka, waxaa lagu qaybiyaa jirka. Kadibna wuxuu u hoggaansamaa dareenka dareenka wuxuuna ka hortagaa hababka muhiimka ah ee jira, sida jabka muruqyada. Natiijadu waa muruq xanuun. Nasiib darro, sida qof weyn, ilmahaaga ma daaweyn kartid antitoxin.